WSIS: Miaro ny Fahalalahana Maneho Hevitra any Tonizia · Global Voices teny Malagasy
WSIS: Miaro ny Fahalalahana Maneho Hevitra any Tonizia
Voadika ny 23 Oktobra 2018 12:30 GMT
Na dia teo aza ny fahasarotana natrehana, voakarakaranay ihany ny semineranay ”Fanehoankevitra Ambany Famoretana” taty amin'ny Fivoriana An-tampony ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina. Tena noho ny hazondamosina matanjaka ananan'ireo mpanohana anay izany, ny ONG Nerlandey Hivos, izay nanilika ilay vondron'ny polisy nanao fitafin'olontsotra izay niezaka ny nanakana anay. Niala ihany ireo mehery setra nony farany rehefa niditra an-tsehatra ny masoivohon'i Pays-Bas ary nampitandrina ny mety hisian'ny korontana ara-diplaomatika. Talohan'ny nanombohanay, nanjaka ny tsy fahazoana antoka sy ny siosio momba ny fahafahantarana raha toa ka afaka hikarakara ilay hetsika izahay na tsia. Toy ny nolazaiko tao anatin'ny lahatsoratra teo aloha, nambaran'ny manampahefana Tonizianina tamin'ireo mpikarakara tamin'ny Alarobia fa tsy misy idirany amin'ny lohahevitra ”TIC ho an'ny Fampandrosoana mihitsy” ilay lohahevitry ny semineran'ilay fivoriana ka noho izany dia tsy mety ilay izy. Tamin'ny marainan'ilay seminera, nanambara ny fanafoanana azy ny petadrindrindra teo ivelan'ilay efitrano. Tsy tao anatin'ilay fandaharampotoana ofisialy izany, ary siosio re avy amin'ireo solontena nitsidika ny tranokelin'ny PNUD fa toa hoe izay olona hipotra ao dia ho samborina avokoa. Namoaka tatitra avy amin'ireo nanatri-maso ny zava-nitranga teny ny mpiara-miasa aminay.
Anisan'ireo mpandray fitenenana ilay blaogera malezianina Jeff Ooi, ilay blaogera shinoa Isaac Mao, ilay blaogera iranianina Hossein Derakshan, ary ilay Zimbaboeiàna mpikatroka anaty Aterineto, Taurai Maduna. Niblaogy mikasika ny fisehon-javatra nanokafanay ilay seminera sy ireo tsikerako tamin'ny fotoam-panokafana i Ethan Zuckerman. (jereo eto ny fanamarihako mialohan'ilay seminera.) Niblaogy ny sasany tamin'ireo fanolorana ihany koa izy: Isaac sy Taurai. Nahay tokoa i Jeff Ooi raha nandaha-teny mikasika ny fomba fanampian'ny fitorahana blaogy amin'ny fanalalahana ny tontolo iainana ara-media ao Malezia izay tena nanindrian'ny antoko eo amin'ny fitondrana sy ireo namany hatry ny fahagola ny haino aman-jery.
Nanolotra famelabelaran-kevitra tsara ihany koa ny direktera teknikan'ny Hetsika Fisantarana Open Net, i Nart Villeneuve, mikasika ny fomba fanasivanan'ny fanjakana manerana ny tany ny Aterineto. Iray amin'ireo mpanoratra tatitra vaovao mikasika ny fanasivanan'i Tonizia ny Aterineto i Nart – miaraka amin'ny fanampian'ny orinasana rindrambaiko Amerikanina. Ity ny lahatsoratra am-blaoginy momba izany olana izany. Rahampitso, hitarika atrikasa iray i Ethan mba hampianarana ny olona handingana itony karazana sivana itony ary hitoraka blaogy amin'ny fomba tsy mitonona anarana.
Tonizianina mpanao gazety marobe nanatrika no nanohitra ny fananankerin'ny lohahevitray, nilaza fa laharam-pahamehana kokoa ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fahamarinan-toerana ara-tsosialy raha oharina amin'ny fahalalahana maneho hevitra any amin'ny firenena mahantra. Nandà mafy izany i Hossein, Isaac ary i Taurai. Nasongadin'i Taurai fa raha tsy malalaka amin'ny fanehoankevitra ny olona rehefa mangalatra ny haniny ary mangalatra loharanon-karena ireo mpiasam-panjakana, dia tena amin'izay kokoa izy no ahiana hijanona hahantra. Nanaiky i Hossein fa vokatry ny famoretana sy ny kolikoly fa tsy zavatra hafa ny fahantrana any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, ary afaka manome ny olom-pirenena ireo fomba hialàna amin'ny fahantrana ny fahalalahana maneho hevitra bebe kokoa.
Raha mahay mamaky teny Alemàna ianao, jereo eto ny sombin-tantaran‘i Markus Beckedahl momba ilay seminera. Manana ity podcast momba ny fanoloran'i Hossein momba ny blaogy Iraniana sy ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-politika ity i Andy Carvin.
Manana lahatsoratra tsara be miaraka amin'ny sary voavao ihany koa i Ethan momba ilay fihaonana an-tampon'ny fiarahamonina sivily tamin'ny Alarobia alina, nokarakarain'ireo mpikatroka ho an'ny demaokrasia afovoan-tanànan'i Tunis ary nifanindran-dàlana tamin'io. Samy nanatrika izany izahay.
Ho an'ireo fanoratana bilaogy WSIS hafa ataon'ireo mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, jereo ny lahatsoratr'i Jeff Ooi momba ny fitantanana ny aterineto amin'ny fomba fijerina Malezianina iray.